Waa kuma Kim Yo Jong hogaamiye cusub oo macquul ka ah Kuuriyada Waqooyi?
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Safarka » Waa kuma Kim Yo Jong hogaamiye cusub oo macquul ka ah Kuuriyada Waqooyi?
Jebinta Wararka Safarka • Wararka Dowladda • News • Kuuriyada Woqooyi Oo Jebisay Wararka • Dadka • Dalxiiska • Warka Safarka Safarka • Wararka kala duwan
Kim Jong Un wuu xanuunsanayay wararka xanta ah ee ku saabsan dhimashadiisuna way sii xoogeysteen oo way sii xoogeysteen. Cusboonaysiinta: Bishii Maajo 1 waxaa soo baxay warar ku saabsan Kim Jong Un si loo arko inuu dalxiis ku tagayo warshad.
Haddii ay wax ku dhici lahaayeen hogaamiyaha millennium wuxuu qarka u saarey inuu la wareego dalka 25.5 milyan. Kim Yo Jong waa 31 sano oo kaliya oo dhalinyaro ah waxaana la filayaa inuu noqdo kaligi taliye cusub iyo hogaamiye iyo kaligii taliye Kuuriyada Woqooyi. Waxay sidoo kale noqon laheyd haweeneyda ugu da'da yar kaligood taliyeyaasha adduunka.
Kim Yo Jong oo ka soo dhex kicisay hay'ada awooda badan ee Kuuriyada Woqooyi iyo Hanuuninta ayaa ka dhigaysa iyada Kuuriyada Woqooyi “Maya. 2 ”marka loo eego xafiisyada shaqaalaha - taasna waxay ka dhigeysaa iyada oo aan ahayn kan ugu muuqda ee dhaxla carshiga Kim Jong Un laakiin, horeyba, waa shaqsi udub dhexaad u ah awooda maamulka.
Kim Yo Jong muhiimada uu u leeyahay OGD, oo awood nolol ama geeri leh ku leh 26 milyan oo muwaadiniinta dalka ah, waxay ku darsaneysaa aragtida sii kordheysa ee ah in Kim Yo Jong loo diyaariyey sanado si uu ugu adeego bedelka Kim Jong Un haddii uusan awoodin arrimaha caafimaadka ama haddii uu dhinto.
Kim Yo-jong waxay dhalatay September 26, 1988. Waa gabadha ugu yar gabadha uu dhalay hogaamiyihii hore ee ugu sareeyay Kim Jong-il.
Haddii xantaasi run tahay oo Kim Jong-un uu dhaafo walaashiis, Kim Yo-jong, waxaa lagu wadaa inay noqoto haweeneydii ugu horreysay ee kaligeed kaligii taliye ka noqota dal.
Dadka u dhuun daloola ayaa sheegaya in haweeney da 'yar oo millennium ah oo maamusha awoodda ugu qarsoon ee nukliyeerka, Waqooyiga Kuuriya laga yaabo inay daaqad u noqoto isbedelada,
Horraantii toddobaadkan, degelka ku yaal Seoul ee Daily NK wuxuu soo wariyay in Kim uu soo kabanayo ka dib markii uu maray wadnaha wadnaha bishii Abriil 12. Xaruntan ayaa soo xigatay ilo aan la magacaabin oo ku sugan Waqooyiga Kuuriya.
#Kuuriyada waqooyi #KIMJONGUNDEAD